Qodobo kasoo baxay kulan ay yeesheen odayaasha beesha Hawiye (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qodobo kasoo baxay kulan ay yeesheen odayaasha beesha Hawiye (AKHRISO)
Shir ay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ku yeesheen odayaasha, waxgaradka kasoo jeeda beesha Hawiye ayaa waxay kusoo saareen qoddobo ku saabsan xaaladda uu dalku ku sugan yahay ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrinta Muqdisho iyo doorshooyinka 2016-ka.
Nabaddoon Abuukar Sheekh Cismaaan (Ganey) oo kulanka ka hadlay ayaa marka hore ku eedeeyay ciidamada dowladda iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay hor istaageen kulankii ay ku yeelan lahaayeen Hoteelka Makka Al-mukaramma ee magaalada Muqdisho, balse aysan sidaasi uga harin oo ay kulankoodii ku qabsadeen goob kale oo gaar ah ayna uga hadleen masiirkooda.
Wuxuu nabadoonka sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu si bareer ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Hawiye ugu adeegsaday ciidamada nabad sugidda islamarkaana ay warar been ah suuqa soo geliyeen.
Wuxuu sheegay in arrinkaasi loo sameeynayay oo kaliya ay ahayd in dadka argagax la geliyo islamarkaana uu kulanka fashilmo, balse tilmaamay inuu kulankoodi meel kale ku qabsadeen.
Dhinaca kale, nabadoon Jimcaale Maxamed Nuur oo dhinaciisa hadlay ayaa hadalkii ugu kululaa kulanka ka jeediyay, wuxuuna sheegay inuu dhammaaday xilkii uu madaxweyne Xasan Sheekh umadda u hayay.
“Waxaanu u sheegaynaa Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud inuusan sidaan madaxweyne ku ahaan karin, hadii aad ka hor timid wax-garadkii madaxda kaa dhigay, way dhammaatay sharciyadaasii.” Sidaas waxaa yiri nabadoon Jimcaale Maxamed Nuur.
Ugu dambeyntii, waxaa kulanka laga soo saaray baaq ka kooban qoddobo dhowr ah, waxaana qodobadaasi ay kala yihiin sida hoos ku qoran:-
Qodobada waxay kala yihiin:
Waa inay dowladdu ka waantowdo ku takri falka awoodeed ee ay ku caan baxday
In dowladdu joojiso marin habaabinta geedi socodka doorashooyinka 2016
In dowladu joojiso faragelinta ay ku hayso xulshada ergooyinka beelaha una ogolaato inay si xor ah isku doortaan.
In dowladu ka waantowdo u adeegsiga hantida qaranka danaha siyaasadeed ee shaqsiga ah.
Shacabka Soomaaliyeed waa inuu isu taagaa difaacida qarannimada, madax-baannida iyo midnimada ummadda.
Ummaddda Soomaaliyeed waxaan ku boorrineynaa inay meel uga soo wada jeestaan badbaadinta qaranka Soomaaliyeed.
Beesha caalamka waxaan ugu baaqeynaa inay dhexdhexaad ka noqoto arrimaha Soomaalida, dhegeystaana codka shacabka Soomaaliyeed.
Waxaan kaloo beesha caalamka weydiisanaynaa inaysan xaqdarro ku taageerin hoggaanka dalka.
Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay ka hor-istaagaan madaxda dalka ku takri-falka awoodeed iyo fara-gelinta qaawan ee ay ku hayso doorashooyinka.
Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayaa kulan ay yeelan lahaayeen odayaasha iyo waxgaradka beesha Hawiye ayaa wax is-hortaag ku sameeyay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda qaranka, kadib markii ay sheegeen in gaari walxaha qarxa saaran yihiin lagu weerari rabay hoteelka Makka Al-mukaramma ee magaalada Muqdisho, taas oo markii dambe noqotay mid lagu cabsi gelinaayay ka qeyb-galayaasha kulanka.
40 per cent of Kenyans optimistic KDF soldiers will trounce al Shabaab – Ipsos